तपाईंको शब्द गणना प्रभाव भ्रमण गर्छ? | Martech Zone
तपाईंको शब्द गणना प्रभाव भ्रमण गर्छ?
बिहीबार, अगस्ट 28, 2008 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
हिजो, मैले कसरी लेखें MySQL प्रयोग गरी तपाईंको वर्ड गणना गणना गर्नुहोस् WordPress मा तपाईंको ब्लगको पोष्टिंगमा। म मेरो पोष्ट विश्लेषण गर्न चाहान्छु यदि मेरो ब्लगले मेरो पोष्टहरू कत्ति लामो समय सम्म प्रभावित भयो भने। यहाँ परिणामहरू छन्!
पृष्ठ भ्रमण बनाम शब्द गणना
नतिजा? छ महिनाको दैनिक पोष्टहरू (कहिलेकाँही प्रति दिन धेरै पोष्टहरू) र प्रत्येक दिनको लागि सम्बन्धित शब्द गणनाको साथ, म बिल्कुल भन्न सक्छु कि शब्दहरूको संख्याले फरक पार्दैन। के फरक पार्ने भनेको केवल पोष्टहरूको गुणस्तर थियो। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मेरो ब्लगले कष्ट पाएन जब मसँग छोटो पोष्टहरू थिए र जब मसँग लामो पोष्टहरू थिए।
ब्लगको कुञ्जीले उत्तम पोष्टहरू लेख्दैछ, हैन खोजी ईन्जिनहरूका लागि लेखन! कुञ्जीशब्द घनत्व तपाइँको पृष्ठ ठीकसँग अनुक्रमणिका हुन सक्छ, तर अन्य साइटहरूका ब्याकलिlin्कहरूले तपाईंको ब्लगलाई परिणाम पृष्ठहरूको शीर्षमा प्रोपेल गर्नेछ। म कुनै पनि दिन एकदम राम्रो कुञ्जी शब्द-रिज्ल्ड पोष्टमा ब्याकलिंक ट्रेड गर्दछु!
यदि तपाइँको शैली लामो-घुमाउरो छ (जस्तै म), तपाईं केहि पाठकहरु लाई आकर्षित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ जो मैले बनाउने धेरै हिज्जे र व्याकरण त्रुटिहरु लाई हेर्दै आनन्द लिन्छु। Blog मेरो ब्लगमा भ्रमणको संख्या लगातार र बढ्दो छ!
यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि मेरो साइटले खोज इञ्जिन ट्राफिकमा लगभग एक ड्रप भोगेको थियो (लगभग २०%) जब म मेरो डोमेन नाम स्विच गरियो र गुगलबाट ईन्डेन्डिing प्रतीक्षा गरीरहेको छ।
अन्त तिर विसंगति मेरो चलिरहेको लोकप्रियता को कारण थियो स्टारबक्स अवमूल्यन पोष्ट - यो ब्लग को सब भन्दा लोकप्रिय को एक… र सबैभन्दा लामो को एक।
टैग: b2c फेसबुकव्यवसाय परिणामग्राहक उजूरीग्राहक सन्तुष्टिव्यापार को लागी फेसबुकफेसबुक मार्केटिंग रणनीतिसोधिने प्रश्नपरिणाम सुधार गर्नुहोस्वफादारीमार्केटिंग भिडियोहरूबहु-डोमेनmyreponoअफशोर
इमानदार अपेक्षाहरूले ग्राहक सन्तुष्टि ल्याउँदछ
अगस्ट 28, 2008 मा 4: 04 AM
उत्कृष्ट लेख, तपाइँसँग १००% सहमत हुनुहोस्। म सानो संसारमा पनि विश्वास गर्दछु, समय छैन र त्यसैले म साना पोष्टहरू लेख्ने गर्छु वा बुलेट पोइन्टहरू।
अगस्ट 29, 2008 मा 7: 30 AM
म छोटो पोष्ट लेख्न को लागी गर्छन किनकि म पाठकको थकानबाट डराउँछु। देख्न पाउँदा खुशी भयो कि मेरो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हुँदैन।